Amin'ny anaran'ny tolona | Hevitra MPANOHARIANA |
Amin'ny anaran'ny tolona
2009-10-24 @ 00:40 in Politika
Miala tsiny indrindra amin'ny tompon'anaram-bolongana fa dia tsy nahita lohateny hafa ankoatra io koa aho amin'ity lahatsoratro manaraka ity. Araka ny fahalalako, dia ny bolongana manana ny anarana hoe "Amin'ny anaran'ny tolona" no fantatro fa bolongana niteny malagasy voalohany indrindra. Mety tsy ho izay no marina saingy, io aloha no hitako hatramin'izao. Efa nisy izany teo alohako fa tsy izaho tsy akory no namoaka bolongana tamin'ny teny malagasy voalohany.
Manaraka izany indray, efa ela aho no te-hanoratra fa toa maromaro ihany ny sampona. Mahatsiaro mahita fahabangana amin'izay vakian'ny mpanara-baovao anefa rehefa mamaky fotsiny izay soratan'ny hafa ka manao anakampo hoe tsy maintsy mamoka lahatsoratra iray aho rahampitso fara-fahatarany, saingy nihemotra hatrany izany. Fandrika lehibe eo anoloako noho izany ny tsy mamoaka vaovao na ny hevitro eto amin'ity sehatra misy ahy ity. Mba eto an-toerana ihany tsinona ny tena ka afa-manaraka tsara ny zava-misy.
Mba mahatsikaritra ve ianareo? Moa tsy amin'ny anaran'ny vahoaka [madinika] sy tsy hahavery foana ny tolona no nandrombahan'ny sasany ny fahefana? [tsy fahefana nomena tamin'ny nahim-pony iny fa noterena tamin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana, tsy voatery ho ambanana fa ialana amin'ny ady an-trano sy ny fandripahana ataon'ny miaramila mpikomy]. Noho ireo dingana isankarazany natao - indrindra fa ny nanomboka ny 25 janoary 2009 nitohy ny ampitsony sy ny afak'ampitsony ary ny tapa-bolana latsaka taorian'izay - no tsy hanekena ny ialana mora eo amin'ny fitondrana. Io ilay lazaiko hoe "Amin'ny anaran'ny tolona" satria tsy noho ny safidim-bahoaka manerana an'i Madagasikara no nahazoana ny fahefana fa tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana.
Raha namaky ny bolongan-dRabelazao [Amin'ny anaran'ny tolona] aho dia ny sarin'i El Che avy any Arzantina no hitako eo ankavanana eo. Tsy tany amin'ny toerana nihaviany anefa no tena nampalaza an'io mpitolona revolisionera io fa tany Kiobà. Rehefa Kiobà no resahina dia mitodika ho azy any amin'ingahy Fidel Castro koa ny eritreritra. Dia namaky sombin-tantaran'io firenena io ny tena ka nahatsikaritra fa nianjadian'ny fanonganam-panjakana nisesisesy ihany koa hay io firenena io nialoha ny an'i Fidel Castro. Dia olona 82 no notarihany voalohany hanangana hery mitam-piadiana nefa dia nahatarika olona maro hafa izy ka naharombaka ny tanànan'i Santa Clara, Kiobà [fa tsy ny Lapan' Ambohitsorohitra an!] tamin'ny faran'ny taona 1958. Ora 12 taorian'izay dia voatery nandositra i Batistà izay filohan'i Kiobà tamin'izany fotoana izany [sao dia mihevitra indray ianareo fa Ravalomanana no tiako lazaina amin'izany?]. Dia notapahina hatreo fa andron'ny Revolisiona Kiobana ihany koa ny 1 janoary 1959. Dia asa aloha ny eritreritry ny mpamaky fa manontany aho hoe fanonganam-panjakana ve no nataon'ny tarik'i Fidel sa tsia?
Nanapa-kevitra tamin'io fotoana io ny Fitsarana Tampony tany an-toerana fa ny Revolisiona no loharanon'ny Lalàna [fototry ny lalàna] ary ny mpitarika ny revolisiona no mandray ny fahefana. Tsy El Che [Che Guevarra] na ry Fidel mpitari-tolona revolisionera no lasa filoha avy hatrany fa izany Manuel Urrutia Lleó izany. Tsy mbola ireo mpitari-tolona ireo ihany koa no nandray ny toeran'ny praiminisitra fa izany José Miró Cardona izany. Inona no toerana noraisin'i Fidel Castro? Lehiben'ny tafika revolisionera na mitovitovy amin'ny CEMGAM eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia nieritreritra aho hoe fa iza tokoa moa no hahala ny CEMGAM sy ny Minisitry ny fiarovam-pirenena eto Madagasikara? Moa tsy efa nanambara ampahibemaso ve ny tao amin'ny Capsat rehefa azony ny minisiteran'ny Fiarovana Ampahibe fa tsy maintsy "ekeny aloha " vao mahazo mipetraka ho minisitry ny fiarovana sy CEMGAM? Moa ve tsy efa eritreritra fa tsisy hahala amin-dry zalahy ireo no mahatonga ny iray aminy niteny hoe tsy misy idiran'ny miaramila izany fifandirana politika misy eto Madagasikara izany fa mety ho tafapetrka eo mandrakizay ry zalahy raha tsy hoe mitady ny toerana ambonimbony kokoa avy eo? Nefa tsy misy ilàny izay toerana ambonimbony rehefa fantany fa eo ampelatanany ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara, ka ny mandray ny fanampi-tambin-karama tamin'ny fiandohan'ny volana martsa 2009 sisa atao. Mipetraka tsara aloha eto fa "Amin'ny anaran'ny tolona" no nahazoana ny fahefana fa tsy amin'ny alalan'ny fifidianana.
Miverina kely amin'ny tantara indray aho, niala tampoka ilay praiminisitra José Miró Cardona rehefa niasa enina herinandro ka teo vao noraisin'i Fidel Castro io toerana io [13 febroary 1959]. Nisy ny filoha fa moa fantatry ny olona ivelan'i Kiobà amin'ny ankapobeny ve izany? Nandray ny toeran'ny praiminisitra i Fidel Castro [hatramin'ny joona 1976] nefa nahalatsa-danja azy niohatra tamin'ny filoha ve izany na tao an-toerana na taty ivelany? Raha ny eto Madagasikara aloha dia tsy mahay izany fa "Antsoy hoe Andriamatoa filoha aho manomboka izao" ihany no ady eo. Na dia sazian'ny lalàna iraisam-pirenena aza fa "tsy mahazo mitondra firenena izay nitarika na nanongam-panjakana tamin'ny alalan'ny hery" dia tsy henoina izany noho ny "Amin'ny anaran'ny tolona".
Mieritreritra aho, rehefa nahavita izay soratra izay, fa matoa isisihana hatrany ny hitadiavana ny toerana "Filoha" dia noho ny tahotra fa tsy manandanja miohatra amin'ny olon-kafa na dia mpiara-dia aminy aza izany olona izany. Na eo ihany koa ny fitiavan-kanafina izay tena naniraka tao ambadika tao. Raha tena mpitarika ny tolona ianao dia afaka mibaiko izay olona rehetra tendrenao amin'ny toerana iray fa tsy tokony hitokozihitra hoe tsy maintsy izaho no eto, ka miteraka ny ahiahin'ny olona manao hoe tsy maniraka tokoa ianao fa irahina.
Ankehitriny moa, toa efa ifampitadiavan'ny mpifanaritaka ao anatin'ny "Amin'ny anaran'ny tolona" izay ifandresena lahatra fa amin'ny anaran'ny lalàna amin'izay no itondrany ny firenena. Tahaka izany ny didim-pitsarana tao amin'ny Filakevim-panjakana manamarika fa ny filoha no manendry ny praiminisitra dia mihorakorak'hafaliana ny sasany fa efa filoha araka ny lalàna - tsy nandalo fifidianana - ny nisora-tena ho filoham-panjakana. Dia nisy izany filankevitry ny Minisitra izany manendry olona ho Praiminisitra vonjimaika ihany koa, tahaka ireny hoe efa nifanarahan'ny efa-tonta miandraikitra ny fanendrena io praiminisitra io. Misy zavatra hafahafa kononkononina ao!
Hitanareo koa moa fa misy ireo mampandresy lahatra fa tsy iadian-kevitra intsony ny mahafiloha an'Ilaikely nefa ny ankolafy iray nanamarika fa tsy misy filazana ao anaty fifanarahana efa voasonia fa izy no filoha. Dia eto isika miandry ny 3 ka hatramin'ny 5 novambra 2009. Ny mahavariana ahy fotsiny dia tahaka ny tsy misy mitaintaina ho'aho ny olona raha sanatria tsy tontosa amin'io fotoana io ny fampiharana ny fifanarahana, na ny ny 6 novambra aza no manapa-kevitra ny momba an'i Madagasikara ny vondrona Eoropeana. Sa efa azo antoka fa tsy ho tapaka intsony ny fanampiana [mbola iankinan'ny malagasy] avy amin'izy ireo?
Farany, fa efa lava izay. Faly ery ilay vohikala iray mpanohana ny FAT amin'izao fotoana izao milaza fa miara-milahatra sy anisan'ny mpitondra firenena folo goavana eto ambonin'ny tany Ilaikely dia lazaina fa miara-milahatra amin'i Barack Obama, Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Ronald Reagan, Lula Da Silva, Arnold Schwarzenegger. Ny fomba filaza dia tahaka ny hoe tafiditra ho filoham-pirenena folo goavana manerantany Ilaikely no tadiavina asongadina hovakian'ny mpamaky, nefa ny filazan'ilay loharano dia mitantara ny lalana nodiavin'ireo olona folo tantarainy ireo. Vohikala frantsay koa moa no nahitana ilay izy ka mety ho ao anatin'ny paika fanambatambazana sy fampaherezana an'ilaikely sy ny mpanohana azy ireny hoe jereo fa malaza erantany sahady ny filohanay. Narangaranga ihany ilay takelaka na dia misy teny hoe "fanonganam-panjakana notarihiny' izay tsy zakany aza ao anatin'ny lahatsoratra. Fa ny tena mampihomehy ahy zavatra hafa tanteraka no tiako soratana nefa dia hafa tanteraka no voasoratra, saingy tsy nosoloiko intsony ilay lohateny hoe "Amin'ny anaran'ny tolona".
jentilisa, 24 oktobra 2009 amin'ny 02:44 maraina.